Magangelyo iyo daryeel caafimaad ee muhaajiriina - Söderhamns kommun
| Magangelyo iyo daryeel caafimaad ee muhaajiriina
Gobalka Gävleborg wuxuu masuul ka yahay fulinta baaritaan caafimaad dhamaan magangalya doonka iyo muhaajiriinta soo gala gobolka Gävleborgs län.
Mowduuca ku saabsan sahan caafimaad waa dadka magangalyo doonka ah, qaxootiga, caruurta ka yar 18 sano, qoysaska qaraabadooda u dacwootay, iyo kuwa ku yimid jaceylka, dadka shaqada ku yimid, ardeyda, qaxootiga qarsoon, kuwa anaa heysan wax dukuminti ah iyo dadka fiisaha mudo kabadan 3 bilood.
Baarintaanka caafimaad waxaa muhiim ah in la ogaado cudarada faafa, ee loogu hortago faafida cudurka iyo in la arko daka dalka ku cusub si loo tallaalo. Waxay sidoo kale ka heli kartaa talo bixin ku saabsan sida ay u raadsadaan lahaayeen daryeelka ugu dhow iyo meel sax ah.
Baaaritaanka caafimaadka waa bilaash gobolka ayaa bixinaaya, tikidka baska, turjuwaanka, marwalba waa diyaar xiriirin tefoon ama asiga oo kula fadhiya.
Halkan waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan baaritaanka caafimaadka ee luqadaada!
Khariidadda: Magangalyo iyo soogalooti caafimaad.